Onye Nimbostratus | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ịga n'ihu na nyocha anyị banyere igwe ojii igwe ojii nke WMO depụtara, anyị chetara na oge gara aga anyị kwuru maka ya Altostratus, taa anyị na-ekwu maka ụdị nke atọ nke igwe ojii dị n'etiti, anyị na-ezo aka na Nimbostratus ma ọ bụ Nimbostratus.
A kọwara ha dị ka a isi awọ ojii mkpuchi, na-ejikarị ọchịchịrị, nke nwere ihu mkpuchi site na mmiri ozuzo ma ọ bụ snow nke na-ada karịa ma ọ bụ obere oge site na ya. Okpukpo igwe ojii zuru oke iji zoo Anyanwụ kpamkpam. Ihe mejupụtara ha bụ ụmụ irighiri mmiri, mmiri ozuzo supercooled, raindrops, kristal, na snowflakes.
A na-akpụ Nimbostratus site na ịrịgo na nnukwu oyi akwa nke ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ
n'elu igwe oyi, na mkpọda na-aga n'ihu ma dị nwayọ. Ọ bụ, ya na Altostratus, isi ntọala nke
un ọkpọiso na-ekpo ọkụ. Ọ bụ igwe ojii siri ike ịkọwapụta, dịka ọ na-egosi dị ka mkpuchi isi awọ,
n’enweghi nkwụsị na ibi elu igwe dum, agwakọtara na ọdịda. N'otu aka ahụ, ọ enyene a
nnukwu akụkụ dị larịị, na saịtị kachasị sie ike ọ nwere ike ikpuchi n'etiti 1 - 5 km, bi, na akụkụ,
ala n'okpuru igwe ojii. Ha na-enyekarị mmiri ozuzo ma ọ bụ snowfall na-aga n'ihu, nke metụtara ihu ihu ọkụ na-ekpo ọkụ.
Ha siri ike ịse foto. Enweghị ọkụ, ya na mmiri ozuzo nke si n'ime ya daa, na-eme igwe
dị ka nnukwu kwaaji gbara ọchịchịrị na-enweghị ntụpọ. Ọ dị mma ka ị gbalịa ịse ha foto mgbe igwe ojii na-adọkpụ na-agafe n'okpuru ha, ya bụ, Stratus mgbaji. Ọ dị mkpa ka ị ghara ịmegharị ha na Altostratus, ndị Nimbostratus anaghị ekwe ka anyị hụ Anyanwụ n'ụzọ ọ bụla ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha na-emepụta mmiri ozuzo na-agafe agafe. Okwesighi ka ha ghahie uzo nke Stratocumulus dika ha adighi edozi.
Igwe ojii a enweghị ụdị ụdị ma ọ bụ ụdị dị iche iche.
Ozi ndị ọzọ - Altostratus
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Ndị Nimbostratus
otú iju n'ígwé ojii na ị na-ama ha
Ogidi nke ìhè, mmetụta mara mma mara mma